Kar Tuwaallada, Baby Tuwaallada, Royal Velvet Tuwaallada, saaraha Buste - Bailixin
Quusin ee dunida ka mid ah dharka guriga gaar ah oo la awoodi karo iyagoo ah guuto our! Waxaan bixinaa shukumaan iyo bustayaal, waayo, qoys kasta sicir macquul ah.
Riix oo ay bartaan nagu saabsan
Our ururinta ciyaaray nooc qubeyska jilicsan shukumaan, microfiber qabow nooc shukumaan isboortiga iyo tuwaalada xeebta, sets shukumaan jikada fashion iyo bustaha sariirta daryeelka set.Comprehensive u ah caafimaadkaaga.
Zero marooji dun Taxanaha
Ka dhuuqida Water In 3 No Agent dhaadheer, bay'adda
Hotel Taxanaha tuwaalka
High-Tayada America Cotton dun
Yurub Oo American Style Design
Afar-lakabka faashad Buste
Sida Loo Doorto Tuwaallada
Adeeganaya shukumaan waa hab fogaynayso. Sure, aad rabto in aad ka iibsan shukumaano in ay dareemaan jilicsan iyo raaxo leh, laakiin waxa aanu 'count garaam' dhab ahaantii ka dhigan tahay? Oo sidee baad u sheeg farqiga u dhexeeya suuf Turkish iyo suuf ama Masaarida qaado ka qaansoroobaad mid ah midabo iyo qaabab? Ka hor inta aadan ku tuur tuwaalka sidoo kale ugu dhakhsaha badan, qaadato xoogaa waqti ah in ay ka akhri guide anfacaya hoos. Waxaan soo ururin oo isugu keenaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan sida loo doorto shukumaan shan qaybood oo muhiim ah, ka size iyo miisaanka dhismaha, si aad search tegi doonaa sida habsami leh ee suurtogalka ah.
Dhaqdo saabuun Tahay
Maxay dhibaato ah: oomo fara badan oo dhab adkaanina kartaa shukumaan. Plus, waa wax aan loo baahan yahay. "Tuwaallada hore u nuugo saabuun haraaga ah ka jirkeena, iyo sababta oo ah waxay tahay isticmaalo si ay u qalalaan maqaarka nadiif ah, iyaga oo aan ku jira in wasakh badan," ayuu yidhi Donna Smallin Kuper, farsamo nadiifinta guriga certified iyo author of Nadiifinta Plain & Simple. Solution: Isticmaal saabuun qeybtii aad u baahan tahay lahaa dhaqmo si caadi ah, ama waxay ka bood "laba kasta oo xashiyihii oo kaliya isticmaalaan khal," ayaa sheegay in Carolyn Childers, sarkaalka guriga sare ee Handy ..
Guide A si Iibsiga Bustayaal
Marka heerkulka habeenkii qaadan Wadh ah, gaari waayo buste ku darto lakabka dheeraad ah diirimaad raaxo leh si aad sariirta. Bustayaal u muuqdaan in ay tagaan maqan iyo faydo - waa aad u qalbi qaboojiyana ama bustaha in qaadataa biilka top sida xiddiga sariirta, iyo go'yaal aad in ay bixiyaan salaax ee debecsanaanta maqaarkaaga damacdaa, laakiin waa bustaha, ka Faydatay Dhudhumadeeda ee ka dhexeeya labada, oo abuuri jeebka dheeraad ah hawada si aad u diiran. Marka ay timaado in aad iibsanayso buste, waxaa laga yaabaa inaad waxaa qabaa '.
Faa'iidooyinka Doorashada Buste baasaboorka a
Weligaa ma maqashay buste baasaboorka ah? Waa wax soo saarka aad u fiican oo bixiya badan oo raaxo. bustayaal waxay ka kooban yihiin ka fiber aalladda baasaboorka jilicsan in ay farxad weyn in aad snuggle buste in.Bamboo waxaa la doorbiday by badan oo ka dhigaysa ay sabab u debecsanaanta oo bixiya raaxada wanaajiyey. Baasaboorka waxay caan ku tahay hantida bakteeriyada. Waxaa ku jira Kun baasaboorka, taas oo ah wakiilka dabiici ah bakteeriyada. Waxa uu awood u leeyahay in ay disho bakteeriyada iyo cayayaanka in khatar halis ku ah caafimaadka.
wax looga qabto North Side of Xiaoyi River, habkii ay Industrial Zone, Hongrun Street, County Gaoyang, Baoding, Hebei, Shiinaha (Dhul)